ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY : Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora
Taorian’ny fitoriana nataona vehivavy iray teny amin’ny biraon’ny Polisy Isotry dia tra-tehaka ireo roa lahy mpanendaka efa malaza ratsy eny amin’ny manodidina. 16 octobre 2020
Efa natolotra ny Fampanoavana, ny alakamisy 14 oktobra lasa teo izy ireo, ka nidoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora amin’izao fotoana izao.
Araka ny fanazavana voaray, teny amin’ny tetezan-dRamala eny amin’ny faritra Ambodin’Isotry iny no nahatrarana ireo roa lahy ny alatsinainy 12 oktobra lasa teo, eny no toerana tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny ary efa marobe ireo mponina sy mpandalo lasibatra tamin’izany, raha ny fitarainana voaray hatrany. Niaiky ny heloka vitany moa ireto farany nandritra ny fanadihadiana natao azy ireo.
Ny Polisim-pirenena eto an-drenivohitra kosa dia manamafy fa tsy mitsahatra manenjika an’ireo andian-jiolahy mpanendaka sy mpanao sinto-mahery izay tena mahazo vahana isan’andro. Mitohy hatrany ny fisafoana ireo tanàna tena ikoizana amin’io tranga io, indrindra moa fa ny eny 67 ha, Isotry sy Ankasina rehetra iny …
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (349) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (116) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (103) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (93) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (85) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (65) 22 octobre 2020